Seenaa - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Bulchaa: Oromoon abbaa biyyaa ta'uusaa agarsiisuun barbaada
Yeroo dheeraaf yaada, Oromoon saba durii kaasee Itoophiyaa keessa ture miti jedhu dhagahaa turuunsaanii akka kitaaba isaanii barreessaniif sababa ta'uu dubbatu Hayyuun diinagdee Obbo Bulchaa Dammaqsaa.
18 Caamsaa 2019
Yaalii fonqolchaa bara 1981: Yaadannoo hadhooftuu ilma janaraal Damisee Bultoo
Fonqolcha Caamsaa bara 1981 irratti shoora olaanaa kan taphatan Janaraal Damissee Bultooti. Ilmiisaanii Darajjee Damissee Bultoo BBC'tti waan hime qaba.
Yaadannoo fonqolcha mootummaa ga'eessa ganna 74 Koloneel Kaasaaye
Yaalii fonqolchaa keessatti kanneen hirmaatan keessaa amma lubbuun kan jiraniifi jiru isaanii magaalaa Bishooftuu kan taasisan ga'eessi ganna 74 Koloneel Kaasaayee Taaddasaa waa'ee yaali fonqolcha waggaa 30'n duraa waan yaadatan BBC'tti himaniiru.
17 Caamsaa 2019
Leenca Gurraacha: Xaayyaarota seena qabeessa Oromiyaan dagatte
Hafteen xayyaarota Xaaliyaanii garee loltoota Itoophiyaa Leenca Gurraacha (Black Lion) jedhamanin bara 1936 gubatan aanaa Waayyu Tuqaa ganda Bonayyaa Muloo keessatti gatamanii argamu.
5 Caamsaa 2019
Seenaa Leenca Gurraachaa fi dirree Bonayyaa
Hafteen xayyaarota Xaaliyaanii garee loltoota Itoophiyaa Leenca Gurraacha (Black Lion) jedhamanin bara 1936 gubatan dirree Bonayyaa Muloo keessatti gatamanii argamu.
4 Caamsaa 2019
ALA 1888 fi 1889tti humni galaanarraa Biriteen bidiruuwwan sadi garboota fe'uun gara Baha Giddugaleessaatti geessaa turan to'annoo jala oolchuun, ijoollee achi keessa turanis bilisa baasan - ijoollee Oromoo. Ijoolleen kunniin eessa turan? Garam dhaqan? Horteen isaanii jiruu?
2 Caamsaa 2019
Seenaa Oromoo: Waa'ee seenaa Aanolee kana beektuu?
Aanoleen siidaawwan yaadannoo Oromoota gita bittaa dura dhaabbachuun yeroo gara garaatti wareegamaniif ijaaraman keessaa isa tokkodha.
1 Caamsaa 2019
Biyyoonni dogoggora seenaa hojjetaniif dhiifama gaafachuu qabuu?
Pireezidantiin Meksiikoo Ispeenifi Vatikaan sarbama mirga namoomaa seenaa keessatti raawwataniif dhiifama gaafachuu qabujedhan.
27 Bitooteessa 2019
Magaalaan durii Tarkii Hasaankeef jedhamtu lafa kanarraa baduuf jirti.
Magaalaan durii Tarkii Hasaankeef jedhamtu lafa kanarraa baduuf jirti. Hidha elektirikii maddisisu ijaaruuf jecha, harki 90 magalaa Hasaankeef haroo nam-tocheen liqimfamuuf jira.
1 Guraandhala 2019
Magaala Kaayiroo piraamidoota Saqaraa keessatti awwaalchi luboota turan waggoota dheeraan booda argaman
Qorattotni hambaa awwaalcha haaraa Masiritti argachuu isaanii himan. Magaala Kaayiroo piraamidoota Saqaraa keessatti awwaalchi luboota turan waggoota dheeraan booda argaman.
17 Muddee 2018
Goree: Magaalaa ji'oota torbaaf magaalaa guddoo Itoophiyaa turte
Magaalaan Goree ji'oota torbaaf magaalaa guddoo Itoophiyaa akka turte quba qabduu?
7 Muddee 2018
Siidaan yaadannoo Indiyaatti dhaabbate meetira 182 ol dheerata
Siidaan Indiyaatti Vaalaabihaabihaayi'n yaadachuuf dhaabbate dheerinaan addunyaarratti gita hin qabu.
31 Onkololeessa 2018
Giiftii Naanii: Garbummaa irraa gara Giiftiitti
Giiftii Naanii garbummaan Gaanaa irraa gara Jamaayikaatti geeffamte.
16 Onkololeessa 2018
Kunuunsa Hambaalee: "Masaraawwan Abbaa Jifaar fi Kumsaa Morodaa jijjiganii badaa jiru"
Masaraawwan mootota durii lixa Oromiyaa jiran lamaan jijjigaanii baduu danda'u jechuun jiraattonni yaaddoo qaban ibsataa jiru.
7 Fuulbaana 2018
Masaraawwan moototaa lixa Oromiyaa jigaa jiru
Masaraa Kumsaa Morodaa keessa homaan waraanaa qubachuufi Masaraan Jimma Abbaa Jifaar immoo suphaa argachuu dhabuu isaatiin haala badaa keessatti argamu.
Oromoo Ormaa: ''Yeroon Oromoon itti tokkoomu gaheera''
Oromoo Keeniyaa keessa jiraatu yoomii fi attamiin biyya abbaasaa Oromiyaa irraa garas deemee? Abdiin wal argaa hoo maal fakkaatti? Turtii BBCn jaarsa Ormaa waliin taasisee kun hundaaf deebii qaba, dubbifadhaa.
3 Fuulbaana 2018
Itoophiyaa: Siidaan Aksuum balaaf saaxilamee jira
Suphaan hatattamaan hin taasifamu yoo ta'e siidaan Aksuum balaa jiguuf saaxilamuu akka danda'u himameera.
2 Hagayya 2018
Kaalaandariin (Henni) Boranaa guyyaa qofa osoo hin taane seenaafi saayinsiilleen of keessaa akka qabu qorataan seenaa ni dubbatu.
7 Guraandhala 2018
"Balaa kanarraa hafuun isaanii, akka waan haaraa dhalatanitti fudhanna" - Yaadannoo waggaa 21ffaa balaa xayyaaraa Komoroos
Xayyaarri Itoophiyaa lakkoofsa balali'aa ET961, ALA Sadaasa 23 bara 1996tti lammiilee Itoophiyaa sadiin butamee, erga sa'aa afur qilleensarra balali'ee booda, galaana Hindii irratti kufee. Balaan kunis erga raawwatee waggoonni 21 darbaniiru.
23 Sadaasa 2017
Angafa dureessootaa Jaakoob Fugariin wal baraa
Osoo har'a lubbuun jira ta'ee, Jaakoob Fugar, doolaara Biiliyoona 400 qabaata ture
22 Sadaasa 2017